အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် Blackmagic RAW အသုံးပြုခြင်း Pro ကို Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K နှင့် URSA Mini ကိုအတူအဆိုပါမွေးနေ့ရဲ့လတ်တလောခရီးစဉ် Shot ၏မှတ်တမ်းတင်နထေိုငျ
Home » သတင်း » အသက်ရှင်နေထိုင် Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K နှင့် URSA Mini ကိုအတူအဆိုပါမွေးနေ့ရဲ့လတ်တလောခရီးစဉ် Shot ၏မှတ်တမ်းတင် Blackmagic RAW အသုံးပြုခြင်း Pro
အသက်ရှင်နေထိုင် Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K နှင့် URSA Mini ကိုအတူအဆိုပါမွေးနေ့ရဲ့လတ်တလောခရီးစဉ် Shot ၏မှတ်တမ်းတင် Blackmagic RAW အသုံးပြုခြင်း Pro
Fremont, CA - မေလ 22, 2019 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် URSA Mini ကို Pro ကို 4.6K နှင့် Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K အဆိုပါမွေးနေ့ရဲ့ Tour 19 ညဥ့် 2018 ဆောင်းဦးရာသီသည်လူကြိုက်များဝဠာ Sigma ဂျပန်ရော့ခ်တီးဝိုင်းအားဖြင့်ရောင်းထွက်မကြာသေးမီခရီးစဉ်၏တိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်မှုအတွက်အသုံးပြုကြသည်။
10 ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း လေး Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K နှင့်ခြောက်လ URSA Mini ကို Blackmagic RAW အတွက် Pro ကို 4.6K ရဲ့မှတ်တမ်းတင်အပါအဝင်ကင်မရာများ, အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ DaVinci စတူဒီယိုဖြေရှင်း post ကိုထုတ်လုပ်မှုတည်းဖြတ်ရေးနှင့်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည် Workflows အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါမွေးနေတဲ့လူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ကားဂိုဒေါင်ရော့ခ်တီးဝိုင်းဖြစ်ပြီး, ခရီးစဉ်ဂျပန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ MAZRI Inc ကိုကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်
တိုက်ရိုက်ပစ်ခတ်မှုညွှန်ကြားထားတဲ့သူ MAZRI Inc ၏မစ္စတာတိုရူ Nomura, said: "ငါသည် Blackmagic ထုတ်ကုန်နှင့်အတူဂမ်မှတည်းဖြတ်ရန်ရိုက်ကူးရာမှအားလုံးလုပ်ငန်းအသွားအလာအချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါ RAW အတွက်မှတ်တမ်းတင်ဖို့ Blackmagic ကင်မရာများအသုံးပြုတဲ့တိုက်ရိုက် image ကိုအံ့သြစရာပါစေနိုင်ရန်အတွက်တန်းကျောင်းသူအများဆုံးရချင်တယ်လို့ပဲ။ အဆိုပါ Blackmagic ကင်မရာရဲ့မြင့်မားတဲ့ mobility နှင့်အတူပေါင်းလိုက်သောအခါသူတို့ကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကြတယ်။ "
"ဒီ Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K လက်ကျင်းပ gimbal ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့်ထိုင်ခုံပရိသတ်ကိုပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်။ သမားရိုးကျလက်ကျင်းပကင်မရာရိုက်ကူးသည့်အခါပြင်ပမော်နီတာအမြဲလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာ4လက်မနောက်ဘက်မော်နီတာဖြစ်ပြီး, အလွန်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းကင်မရာကို setup ကိုသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ကြောင့် Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 5K နှင့်အတူပြင်ပမော်နီတာဘို့မလိုအပ်ရှိ၏။ အဆိုပါ user interface ကိုသငျသညျဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါကင်မရာနှင့်အတူလှလှပပဖျော်ဖြေပွဲမီးခိုးများ gradation ကိုဖမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့မပါဘဲလည်ပတ်နိုင်အောင်ရိုးရှင်းပါသည်။ အဆိုပါ Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K ၏ dynamic range ကိုတကယ်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ အဆိုပါပျေါလှငျနှင့်မှောင်မိုက်အရိပ်လှပသောကျန်ရစ် "ကင်မရာမင်းမစ္စတာ Masatoshi Toyonou ကဆိုသည်။
"ဒီဟာ URSA Mini ကို Pro ကို 4.6K ၏ ND filter ကို built-in ကယ့်ကိုတက်ကြွခဲ့သည်။ အဆိုပါအလင်းရောင်ကျယ်ပြန့်စင်မြင့်ပေါ် မူတည်. ကွဲပြားသောကြောင့်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှတစ်ဖျော်ဖြေပွဲရိုက်ကူးထားတဲ့ ND filter ကိုမပါဘဲအမှုကိုပြုလို့မရပါ။ ဤသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ Blackmagic RAW format ကိုသုံးပြီးခဲ့ဘူးပထမဦးဆုံးမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ် "ဟုမစ္စတာ Nomura ကဆိုသည်။ "ငါသည် Blackmagic RAW မှာတကယ်အံ့သြသွားတယ်! ဒေတာကို2နာရီဟာအလွန်သေးငယ်တဲ့ဖိုင်အရွယ်အစားခဲ့ထက်ပိုမိုများအတွက်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်။ ယင်း၏ data တွေကိုအချိန်တိုအတွင်းဘတ်စေနိုင်ပြီး, ကျွန်တော်ချက်ချင်းတည်းဖြတ်ရေးပေါ်တွင်အလုပ်စတင်နိုင်နိုင်ဘူး။ Blackmagic RAW တာပိုမြန်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြစ်ပြီး, ကြီးမားတဲ့စွမ်းရည်မှတ်တမ်းတင်မီဒီယာများမလိုအပ်ပါဘူး။ Blackmagic RAW ရှည်လျားပစ်ခတ်မှုနှင့်များစွာသောကင်မရာများလိုအပ်ကြောင်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ "
လေးပါး Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4.6Ks နှင့်အတူတက်ကြွစွာ MFT မျက်ကပ်မှန်အသုံးပြုနေစဉ်ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်, သူတို့က, EF တောင်ပေါ်မှာ, PL တောင်ပေါ်မှာများနှင့် B4 တောင်ပေါ်မှာတစ်ဦးရောနှောအပါအဝင်ခြောက်ဦး URSA Mini ကို Pro ကို 4K, ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ "ဟုအဆိုပါ URSA Mini ကို Pro ကို၏ဘက်စုံကျွန်တော်တို့ကိုတဦးတည်းကင်မရာစနစ်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအခြေအနေများကိုင်တွယ်နိုင်မှခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာ URSA Mini ကို Pro ကို 4.6K နှင့် Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K "အလွန်လှပသောအသားအရေတန်ချိန်ဖမ်းယူကာစုစည်းရုပ်ရှင်ရုံကိုကြည့်သည်နှင့်ကင်မရာနှစ်လုံး၏ကျယ်ပြန့် dynamic range ကိုမှာတကယ်အံ့သြသွားတယ်ကင်မရာမင်းမစ္စတာ Shinya Yamada ကပြောကြားသည်။
မစ္စတာ Yamada အရောင်တန်း၏တာဝန်ခံလည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ "ငါသည်အရောင်အဆင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယိုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ငါတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ၏ရှေ့မှောက်တွင်ခံစားရဖို့ကြည့်အပြီးသတ်မယ်လို့သတိဖြစ်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုတိုက်ရိုက်အလင်းရောင်အခြေအနေများအတွက်ပစ်ခတ်ခံခဲ့ရရင်တောင်ကကုန်ကြမ်းလျှင်, များစွာသောအရောင်များဂမ်စဉ်အတွင်းထုတ်ခံရနိုင်ပြီး, ချိန်ညှိအစိတ်အပိုင်းများဒဏျကွေးစေနိုင်ပါတယ်။ DaVinci ဖြေရှင်းရန်နှင့်အတူ Blackmagic RAW ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အခြား RAW ကို formats ထက်အများကြီးပိုမြန်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကိုင်တွယ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်လူအပေါင်းတို့ Workflows တက်အမြန်နှုန်း။ "
URSA Mini ကို Pro ကို၏ကုန်ပစ္စည်းဓာတ်ပုံများ, Pocket ရုပ်ရှင်ရုံကင်မရာ 4K, DaVinci စတူဒီယိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအဖြေရှင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images ။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-05-22
ယခင်: စတူဒီယို Technologies က Introduces နယူးDante®ခွား Beltpacks
နောက်တစ်ခု: Todd အေလုပ်ဆောင်စရာ Reis, ASC ဒါဝိဒ်သည်လူကိုများအတွက်ကမ္ဘာနှစ်ခုကိုပုံဖျောဖို့နှစ်ခုကှတျချမှန်ဘီလူးစနစ်များကိုရွေးကောက်ပြီး